Dalxiiska Jamaica si uu uga faa'iideysto xarun deyn ah oo gaareysa $ 70 milyan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica si uu uga faa'iideysto xarun deyn ah oo gaareysa $ 70 milyan
Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Hon. Edmund Bartlett ayaa shaaca ka qaaday in Sanduuqa kobcinta Dalxiiska (TEF) uu heshiis isfaham ah la saxiixday Jamaica National Small Business Loans Ltd (JNSBL) si $ 70 milyan looga dhigo mid ay ku heli karaan hawl wadeenada waaxda gaadiidka dhulka dalxiiska, kuwaas oo saamayn taban ku yeeshay. waxaa qaaday cudurka faafa ee COVID-19.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa ku dhawaaqay qorshayaashii ugu dambeeyay ee dadaalkii ugu dambeeyay ee dalka loogu talagalay shaqaalaha dalxiiska.
Amaahdu waxay noqon doontaa mid la heli karo Laan kastoo JN ah laga bilaabo Julaay 1, 2021.
Dulsaarka dulsaarka amaahdan waxaa lagu bixin doonaa boqolkiiba eber, oo aan laga bixin doonin khidmadaha wax-qabadka, iyo joojinta 8-bilood ee maamulaha.
Wasiir Bartlett ayaa sidaa ku dhawaaqay mar uu warbixin ka siinayay dib u soo kabashada waaxda dalxiiska ee baarlamaanka shalay (Juun 29).
“Waxaan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in aan soo gabagabeynay qorshayaashii ugu dambeeyay ee aan ugu talagalnay shaqaalaha dalxiiska Sanduuqa kobcinta dalxiiska (TEF) ayaa bilaabay in lagu shubo irbad dhan $ 70 milyan oo doolar si loo taageero hawlwadeenada gaadiidka dalxiiska ee dhibatooyinka baaxada leh kala kulmay burburka COVID-19 ee faafa iyo hoos u dhaca baaxada leh ee dalxiiska sanadkii la soo dhaafay, ”Wasiirka Bartlett muujiyey.
Amaahda, waxay noqon karaan kuwo la heli karo JN kasta oo bilaabanta 1da Luulyo, 2021, waxaana lagu siin doonaa boqolkiiba eber dulsaarka dulsaarka; iyadoo la joojinayo 8 bilood oo maamulaha ah iyo ugu badnaan muddo seddex sano ah oo lacag la aan, "ayuu yiri wasiirka Bartlett.
Goobta amaahda waxaa markii ugu horaysay ku dhawaaqay wasiir Bartlett intii lagu gudajiray soo jeedintiisa Dood Wadaageed oo uu ku soo bandhigayay baarlamaanka bishii Juun 15.
Wuxuu sharaxaad ka bixiyay in laga heli karo JNSBL waxayna u oggolaan doontaa deyn bixiyeyaasha inay helaan ugu badnaan J $ 1 milyan oo qayb bille ah illaa 12 bilood.
Wasiir Bartlett ayaa sidoo kale qeexday: “Waxaa la isku raacay in amaahdu noqon doonto mid aan la hubin, maaddaama caqabadaha ku xeeran uruurinta deymaha ay ka hor istaageyso qaar ka mid ah hawlwadeennada inay galaan xarunta, gaar ahaan kuwa aadka ugu baahan noocyadan gargaarka si ay u sii ahaadaan waara . ”
Iyadoo lala kaashanayo JNSBL, howsha arjiga ayaa laga dhigay mid fudud, iyo si loo fududeeyo xitaa codsadayaal badan, TEF waxay xaqiijisay adeegyada xisaabiyeyaasha la xaqiijiyay si ay uga caawiyaan codsadayaasha diyaarinta Bayaanka Qulqulka Lacagta ee loo baahan yahay oo qayb ka ah arjiga.
Wasiir Bartlett wuxuu caddeeyay in xisaabiyeyaashu ay fududeeyeen in ka badan 40 darawal ilaa Sabtidii, 26-kii Juun, 2021, iyadoo kuwa kalena hadda la caawinayo.
Soo bandhigida xarunta amaahda waxay daba socotaa codsiyo ay soo jeediyeen xubno ka tirsan waaxda gaadiidka ee gargaarka.
Kulankii ugu dambeeyay ee dalxiiska ee ay martigalisay Shabakada Dalxiisyada Xiriirka Dalxiiska (TLN), ee ku saabsan sida dalxiisku u saameeyay qeybaha kale, Madaxweynaha Jamaica Co-operative Automobile and Limousine Tours (JCAL), Brian Thelwell, wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay gaadiidka dhulka ee dalxiiska iyo waxay ku baaqeen in taageero dhaqaale la siiyo hawlwadeenada si loogu diyaariyo soo kabashada warshadaha. Wuxuu ka codsaday bangiyada gaar ahaan, inay u jilicsanaadaan kuwa haysta amaahda.
"Xarunta amaahda COVID-19 Relief waxaa heli doona xubnaha JUTA, JCAL iyo MAXI ee bixiya gaadiidka dhulka kuwaas oo ay tahay inay buuxiyaan dhowr shuruudood oo xaq u yeelasho," ayuu yiri Mr. Bartlett.
In ka badan 5,000 oo ka shaqeeya gaadiidka qaybta dalxiiska Waxaa saameyn taban ku yeeshay qufulka qasabka ah ee waaxda dalxiiska sanadkii la soo dhaafay, faafida awgeed.